admin – Page 256 – Shabakadda Amiirnuur
Dhageyso Xildhibaano Mucaaraday Magacaabista Eng Yariisow.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka federalka ah ayaa si toos ah u mucaaraday tallaabadii dhawaan Yariisow loogu magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir. Xildhibaanadan oo kala ah Axmad Macallim Fiqi iyo Sakariye Maxamuud Xaaji oo meel madal ah ka hadlayay ayaa sheegay in aysan cadaalad ahayn in madaxda dowladda ay magacaabaan gudoomiyaha gobolka Banaadir […]
Sarkaal Ka Tirsan Puntland oo Gaalkacyo Lagu Dilay Iyo Al-Shabaab oo Sheegtay.
Mid kamid ah saraakiisha maamulka Puntland ayaa caawa lagu khaarajiyay wuqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug kadib markii qarax lala beegsaday. Sarkaalkan ayaa waxaa lagu helay xaafadda loo yaqaano “Israac” waxaana uu u geeriyooday wax yeello culus oo kasoo gaartay qaraxa oo ahaa mid culus, sida ay dad deegaanka ah […]
Gaari Gaashaaman oo Amisom Looga Gubay Shabeelaha Dhexe.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeelaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in gaari dagaal laga gubay ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa Burundi xilli ay socdaal ku jireen. Iyagoo kolonyo ah ayaa waxaa lagu beegsaday duleedka degmada Balcad waxaana la xaqiijiyay in hal gaari oo Taw ah laga gubay ciidamada Burundi. Gaarigan gaashaaman […]
Jarmalka oo Ku Dhawaaqay Inuu Saraakiishiisa Milatari Kala Baxayo Soomaaliya.
War rasmi ah oo kasoo baxaya dowladda Jarmalka oo kamid ah dhinacyada qeybta ka ah duullaanka lagusoo qaaday dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lasoo gaba gabeynayo joogitaankii Melleteriga wadankaasi ee Soomaaliya. Dowladda Jarmalka waxay xaqiijisay in dabayaaqada Bisha Maarso ee sanaddan 2018 ay labaxayso saraakiisheeda Melleteri ee qaabka tababarka […]
Sawirro+Dhageysi: Diiradda Jimcaha oo Lagu Soo Qaatay Munaasabad Ka Dhacday Sh/hoose.
Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo usbuuciiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan islamarkaana aad uga barateen mawaadiic muhim ah ayaa waxaa maanta lagu soo qaatay munaasabad ka dhacday gobolka Sh/hoose, taas oo lagu soo xirayay machad aqoontooda kor loogu qaadayay ducaad da’yar oo laga soo xulay degaanada […]
Dhageyso Gabayo Lagu Guubaabiyay Guutooyinka Galgala.
Abwaano Soomaaliyeed ayaa gabayo qiimo badan ku cabiray halganka lagula jiro ciidamada shisheeye iyo maamulada maqaar saarka ah ee ku daaban. Abwaaniinta kala ah: Taakow Mucallim Ciise iyo Yuusuf Yare ayaa waxay tiriyeen labo gabay oo cajiib ah kuwaasoo ay si gaar ahaaneed ugu sii guubaabinayaan guutooyinka Al-Shabaab ee ku […]
Waa Sidee Xaaladda Wasiiru-dowlihii Xalay Lagu Dhaawacay Boosaaso.
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa habeenkii xalay lagu dhaawacay wasiiru-dowlihii dekedaha, waxaana faahfaahin laga helayaa xaaladdiisa caafimaad. Wasiir dowlahan oo lagu magacaabo Axmed Saciid Cabdi ayay rag hubeysani rasaas ku fureen xilli uu marayay mid kamid ah wadooyinka waaweyn ee Boosaaso. Ilo wareedyo si aad ah ugu dhow Axmad […]
Daawo Vedio: Taliyaha Guutada 10-aad Ee DF oo Lagu Eedeeyay Gumaad Ka Dhan Ah Qabiil.
Iyadoo degmooyinka ay ka taliyaan ciidamada Itoobiya iyo askarta dowladda ay ka taagan tahay dhibaato adag ayaa waxaa isi soo taraya qabaa’ilka ku dhiiranaya iney hadlaan oo gilgishaan. Wax garadka kasoo jeeda mid kamid ah qabaa’ilka Gedo, gaar ahaan Garbahaare ayaa taliyaha guutada 10-aad ee ciidanka DF Maxamed Cadow Cali […]
Afar Xisbi Oo Soo Saaray Warsaxaafadeed Caqabad Ku Ah Farmaajo.
Siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur iyo tiro Xildhibaanno ah ayaa dib usoo cusboonaysiiyay kiiskii ku saabsanaa weerarkii dadka badan lagu dilay ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay xarunta Xisbiga Wadajir ee magaalada Muqdisho. Tani ayaa ah mid aan u wanaagsaneyn madaxada Dowladda Federaalka Farmaajo iyo Kheyre oo culeys siyaasadeed kala […]
Diyaarad Drone Ah oo Mar Kale Kusoo Dhacday Duleedka Kismaayo.
Dayuurad nooca wax basaasa oo Drone ah ayaa kusoo dhacday degaan dhaca duleedka magaalada Kismaayo oo lagu magacaabo Beerxaani. Wararka halkaas ka imanaya ayaa sheegaya in dayuuradan oo saacado badan dul heehaabeysay magaalada ay soo dhacday waxaana gacanta ku dhigay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab. Arrintan ayaa kusoo hagaagtay xilli maalmihii lasoo […]